उमेर बढाउँछ आधा घन्टाको व्यायामले - ज्ञानविज्ञान
उमेर बढाउँछ आधा घन्टाको व्यायामले
Topics #उमेर #व्यायाम
Don't Miss it होस गर्नुस् , तपाईंलाई पुरुष ग्रन्थीसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ
Up Next गिजामा समस्या भए ल्वाङ चिया पिउनुहोस्
कसरी नियन्त्रण गर्ने जाडोमा रक्तचाप बढे ?
जीवनशैली बद्लेर, सन्तुलित आहारको सेवन, उचित व्यायाम गरेर पनि उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधीको…
पिसाब पोल्ने समस्याबाट बच्न यी घरेलु उपचार अपनाउनुहोस्
– दुधमा मिश्रीको मिश्रण बनाएर पिउदा पनि यो समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । – केहि दिनसम्म फिटकिरीमा थोरै पानी मिसाएर दिनमा…
धेरै सुत्नु स्वास्थकोलागि हानिकारक हो । बिहान अबेर सम्म सुत्नु त झन् राम्रो होइन । मानिसलाई जति अल्क्षि गरेर सुत्यो उति…
लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न लागि के गर्ने ?
गर्मी बढने क्रम सँगै लामखुट्टे पनि बढीरहेका छन् । लामखुट्टेको टोकाईले निरन्तर चिलाउने समस्या मात्र होइन यसले मलेरिया, इन्सेफलाइटिस र…
कसरी राख्ने स्वास्थ्यको ख्याल चिसो मौसममा ?
विशेषगरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरुमा यस्ता समस्या बढी देखिने गर्छ । यही क्रममा वायुमण्डलमा हुने विभिन्न रोगको संक्रमणले समेत…
के हो पिनास ? किन हुन्छ पिनास ? यसका लक्षण र उपचार जानिराख्नुस्
हामीमध्ये धेरैलाई जीवनमा कुनै न कुनै बेला पिनासले सताएकै हुन्छ । अझ कोही–कोही त पिनासको दीर्घरोगी नै हुन्छन् । अहिले…
खानपान, फिचर्ड, स्वास्थ्य
गर्मी मौसममा के खाने के नखाने ? गर्मीमा स्वस्थ रहन जान्नै पर्ने कुराहरु
गर्मी महिना शुरु भएको छ । गर्मी महिनामा आफ्नो हात र शरिरका विभिन्न अंगको सफाईमा ध्यान दिनु पर्छ । गर्मी…
Heart Attack, Illustration
हर्ट ब्लकेज के हो ? यसबाट बचाउने ८ चीज
मुटु सम्म पुग्ने नशाहरु जुन इलेक्ट्रिकल सिस्टममा चलीरहेको हुन्छ यदी यो सीस्टममा अनियमीतता आएमा हुने गडबडीलाई हर्ट ब्लकेज भनिन्छ ।…
स्वाद लिएर चपाई-चपाई खाना खाँनुका कस्ता छन् फाइदा ? अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण जानकारी
खाना के खाने ? धेरैले यसको जवाफ खोज्ने गर्छ । सन्तुलित र पौष्टिक आहार खानुपर्छ भन्ने हामीले जानकारी पाइसकेका छौं…